Ukusetshenziswa kwe-proply gallate
I-Propyl gallate (PG), eyaziwa nangokuthi i-propyl gallate, inefomula yamangqamuzana we-C10H12O5. Isisindo samangqamuzana esihlobene ngu-212.21. Njengoba amaShayina "Amazinga Wempilo Yokusebenzisa Izithasiselo Zokudla" (GB2760-2011) esho: Ipropyl gallate ingasetshenziswa kumafutha okudla, ukudla okuthosiwe, izinhlanzi ezomisiwe ...
Ukuthuthukiswa kwe-high-purity gallic acid kanye nokusetshenziswa kwayo kumakhemikhali kagesi
Amakhemikhali kagesi ngokuvamile abhekisa kumakhemikhali akhethekile embonini ye-elekthronikhi. Njengamanje, kukhona amashumi ezinkulungwane zezinhlobonhlobo, ezicela izidingo zekhwalithi ephezulu, ukusetshenziswa okuphansi, izidingo eziphakeme zokuhlanzeka kwendawo yokukhiqiza nokusebenzisa kanye nokwenza ngcono ...
I-acid Hydrolysis Indlela ye-acid hydrolysis ihlukaniswe kakhulu yaba yinyathelo elilodwa kanye nezinyathelo ezimbili. Inqubo yokugeleza okuyizinyathelo ezimbili zokulungiselela i-gallic acid impahla eluhlaza → isizinda samanzi ashisayo → isiqa sensalela → t ...
I-Tannic acid iyindlela ethile ye-tannin, uhlobo lwe-polyphenol. I-asidi yayo ebuthakathaka (pKa cishe 6) kungenxa yamaqembu amaningi e-phenol esakhiweni. Ifomula yamakhemikhali ye-tannic acid yokuhweba ivame ukunikezwa njenge-C76H52O46, ehambelana ne-decagalloyl glucose, ...
Umongo Wokusetshenziswa KweGallic Acid kanye Nokusetshenziswa
I-Gallic acid iyinto ebalulekile kukayinki wensimbi, umbhalo ojwayelekile waseYurophu wokubhala nokudweba kusukela ngekhulu le-12 kuya kwele-19, unomlando odlulela embusweni waseRoma kanye neMiqulu YasoLwandle Olufile. UPliny Omdala (23-79 AD) uchaza ukusetshenziswa kwe-gallic acid njenge ...